We.com.mm - ဘဝသဈတဈခုပွနျလညျမှေးဖှားခွငျး
လူသားတဈယောကျတညျးကနေ နောကျတဈယောကျကိုမယုံကွညျနိုငျစရာပွောငျးလဲသှားတဲ့အကွောငျးအရာတှေ၊ ပုံပွငျတှအေမြားကွီးရှိပါတယျ။ အခု ကြှနျတျောပွောပွမှာက ပကျထရဈလို့ချေါတဲ့ လမျးပျေါကဘဝပကျြခါနီး ဆေးသမားတဈယောကျရဲ့အကွောငျး နဲ့ သာမနျလူတဈယောကျလိုဖွဈအောငျ သူ့ရဲ့ဘဝကိုဘယျလိုမြိုးပွနျလညျတညျဆောကျယူသလဲဆိုတဲ့အကွောငျးပါ။
ပကျထရဈစပွီး ဆေးစှဲတဲ့အခြိနျဟာ ကြောငျးနတေဲ့အရှယျ အသကျ ၁၄ နှဈလောကျကတညျးကပါ။ ကြောငျးစာတှမေလိုကျနိုငျလို့ ဆေးစသုံးမိရာကနေ နောကျဆုံးဆေးသုံးနတောကိုတှသှေ့ားပွီးကြောငျးကပါ အထုတျခံခဲ့ရတယျ။ ကြောငျးကအထုတျခံလိုကျရပွီး ဆေးလိပျ နဲ့ ဆေးခွောကျကိုနစေ့ဉျသုံးစှဲနတောသူ့ဘဝတဈခုလုံး ခြောကျထဲကဖြို့လမျးစဖွဈလာခဲ့ပါတယျ။
ဆေးဖွတျတဲ့ဆေးရုံကိုပို့တဲ့အခါ ပကျထရဈပိုပွီးနာမညျကွီးလာခဲ့တယျ။ အကွောငျးကတော့ သူ့အနနေဲ့ ဖြားနာနတောမဟုတျလို့ဆေးရုံတကျစရာမလိုဘူးဆိုပွီး ဆေးရုံကနမေကွာခဏထှကျပွေးလို့ပါ။ အဲဒီလိုနဲ့ဆေးရုံ နဲ့ အိမျကွားမှာ လုံးလညျခြာလညျလိုကျရငျး ပကျထရဈရဲ့အခွအေနကေပိုဆိုးလာတယျ။ မသုံးရရငျမနနေိုငျတော့သလို၊ တဈခါတဈလမှော ရူးကွောငျကွောငျအမူအရာတှလေုပျတာကွောငျ့ မိသားစုကတောငျ သူ့ကို ပေါကျ သှားပွီလို့ထငျကွတယျ။
တဈရကျမှာတော့ ပကျထရဈရဲ့ကြောငျးနတေုနျးက သူငယျခငျြးဖွဈတဲ့ ဝမျဂြာ ဟာလမျးထောငျ့တဈခုမှာထိုငျနတေဲ့ပကျထရဈကို တှပွေီ့း မှတျမိသှားခဲ့တယျ။ သူမ ပကျထရဈနဲ့စကားပွောနရေငျး ပကျထရဈရဲ့တဈခကျြတဈခကျြဗလုံးဗထှေးစကားတှထေဲမှာ သူ့အနနေဲ့ လမျးပျေါကနခှောပွီး ဘဝသဈကိုစတငျခငျြတဲ့အရိပျအယောငျတှမွေငျခဲ့ရတယျ။
အဲ့ဒီနောကျဝမျဂြာ ရဲ့အကူအညီနဲ့အတူ ပကျထရဈရဲ့မိသားစုဟာ ပွနျလညျထူထောငျရေးစငျတာတဈခုနဲ့ခြိတျဆကျနိုငျခဲ့ကွတယျ။ ဆေးရုံကနမေကွာခဏထှကျပွေးတဲ့ကောငျလေးတဈယောကျ ပွနျလညျထူထောငျရေးဂဟောရောကျနပွေီဆိုတဲ့သတငျးကွားတော့ ကငျညာနိုငျငံတဈဝနျးလုံးက ငှနေဲ့တခွားအကူအညီမြိုးစုံဟာ ပကျထရဈဆီရောကျလာခဲ့ပါတယျ။
ပကျထရဈရဲ့ဘဝအတေျာ့ကိုပွောငျးလဲသှားခဲ့တယျလို့ဆိုရမှာပါ။ ကွောငျတောငျတောငျမကျြလုံးတှနေဲ့ ယိုယှငျးနတေဲ့သူ့မကျြနှာဟာ အခြိနျတျောတျောကွာပွီးတဲ့နောကျမှာတော့ ပုံမှနျပွနျဖွဈသှားခဲ့တယျ။ နောကျပွီး သူ့အနနေဲ့ ဟငျဂါ လို့ချေါတဲ့မီနီမတျလေးဖှငျ့ပွီး ကိုယျပိုငျစီးပှားရေးလေးတောငျလုပျနပေါပွီ။
ဆေးလုံးဝဖွတျလိုကျပွီး လူကောငျးပကတိဖွဈသှားတဲ့ ပကျထရဈရဲ့ပုံစံကတော့ မယုံနိုငျစရာပါပဲ။
“ ကြှနျတျော လူအသဈတဈယောကျဖွဈသှားသလိုပဲ ..။ အဲဒီမှောငျမိုကျပွီး ဆိုးဝါးတဲ့ ဆေးသမားတဈယောကျရဲ့ဘဝမြိုးလညျးဘယျတော့မှပွနျမဖွဈပါစနေဲ့လို့ ဘုရားသခငျဆီမှာ နစေ့ဉျဆုတောငျးတယျ “
ပကျထရဈတို့နထေိုငျတဲ့ ကငျညာနိုငျငံဟာ နှဈပေါငျးမြားစှာကွာအောငျ အာဏာရှငျတို့ရဲ့အုပျခြုပျမှု၊ လူမြိုးရေးပွသနာတှေ နဲ့ မူးယဈဆေးဝါးဒဏျတှကေိုခံခဲ့ရတဲ့နိုငျငံဖွဈပွီး အခုထိလညျး မွို့တျောနိုငျရိုဘီထဲမှာ မူးယဈဆေးတှအေလှနျအမငျးပွနျ့နှံ့နဆေဲဖွဈပါတယျ။
ဒါပမေယျ့ ပကျထရဈရဲ့ အကွောငျးလေးကနကြှေနျတျောတို့ဘာကိုသငျခနျးစာယူကွမလဲ ? ဘယျလောကျပဲ ဘဝဟာ ဆိုးရှားစုတျပွတျနပေါစေ။ ကိုယျ့ဘေးနားမှာရှိတဲ့ သူငယျခငျြးကောငျးတှေ၊ လူကောငျးတှသောရှိမယျဆိုရငျ မငျးဘဝကို အသဈကပွနျစဖို့ဘယျတော့မှနောကျမကသြေးပါဘူး ဆိုတာပါပဲ။
Ref : Patrick’s life : Incredible Transformation ofaDrug man
လူသားတစ်ယောက်တည်းကနေ နောက်တစ်ယောက်ကိုမယုံကြည်နိုင်စရာပြောင်းလဲသွားတဲ့အကြောင်းအရာတွေ၊ ပုံပြင်တွေအများကြီးရှိပါတယ်။ အခု ကျွန်တော်ပြောပြမှာက ပက်ထရစ်လို့ခေါ်တဲ့ လမ်းပေါ်ကဘ၀ပျက်ခါနီး ဆေးသမားတစ်ယောက်ရဲ့အကြောင်း နဲ့ သာမန်လူတစ်ယောက်လိုဖြစ်အောင် သူ့ရဲ့ဘ၀ကိုဘယ်လိုမျိုးပြန်လည်တည်ဆောက်ယူသလဲဆိုတဲ့အကြောင်းပါ။
ပက်ထရစ်စပြီး ဆေးစွဲတဲ့အချိန်ဟာ ကျောင်းနေတဲ့အရွယ် အသက် ၁၄ နှစ်လောက်ကတည်းကပါ။ ကျောင်းစာတွေမလိုက်နိုင်လို့ ဆေးစသုံးမိရာကနေ နောက်ဆုံးဆေးသုံးနေတာကိုတွေ့သွားပြီးကျောင်းကပါ အထုတ်ခံခဲ့ရတယ်။ ကျောင်းကအထုတ်ခံလိုက်ရပြီး ဆေးလိပ် နဲ့ ဆေးခြောက်ကိုနေ့စဉ်သုံးစွဲနေတာသူ့ဘ၀တစ်ခုလုံး ချောက်ထဲကျဖို့လမ်းစဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။
ဆေးဖြတ်တဲ့ဆေးရုံကိုပို့တဲ့အခါ ပက်ထရစ်ပိုပြီးနာမည်ကြီးလာခဲ့တယ်။ အကြောင်းကတော့ သူ့အနေနဲ့ ဖျားနာနေတာမဟုတ်လို့ဆေးရုံတက်စရာမလိုဘူးဆိုပြီး ဆေးရုံကနေမကြာခဏထွက်ပြေးလို့ပါ။ အဲဒီလိုနဲ့ဆေးရုံ နဲ့ အိမ်ကြားမှာ လုံးလည်ချာလည်လိုက်ရင်း ပက်ထရစ်ရဲ့အခြေအနေကပိုဆိုးလာတယ်။ မသုံးရရင်မနေနိုင်တော့သလို၊ တစ်ခါတစ်လေမှာ ရူးကြောင်ကြောင်အမူအရာတွေလုပ်တာကြောင့် မိသားစုကတောင် သူ့ကို ပေါက် သွားပြီလို့ထင်ကြတယ်။
တစ်ရက်မှာတော့ ပက်ထရစ်ရဲ့ကျောင်းနေတုန်းက သူငယ်ချင်းဖြစ်တဲ့ ၀မ်ဂျာ ဟာလမ်းထောင့်တစ်ခုမှာထိုင်နေတဲ့ပက်ထရစ်ကို တွေ့ပြီး မှတ်မိသွားခဲ့တယ်။ သူမ ပက်ထရစ်နဲ့စကားပြောနေရင်း ပက်ထရစ်ရဲ့တစ်ချက်တစ်ချက်ဗလုံးဗထွေးစကားတွေထဲမှာ သူ့အနေနဲ့ လမ်းပေါ်ကနေခွာပြီး ဘ၀သစ်ကိုစတင်ချင်တဲ့အရိပ်အယောင်တွေမြင်ခဲ့ရတယ်။
အဲ့ဒီနောက်ဝမ်ဂျာ ရဲ့အကူအညီနဲ့အတူ ပက်ထရစ်ရဲ့မိသားစုဟာ ပြန်လည်ထူထောင်ရေးစင်တာတစ်ခုနဲ့ချိတ်ဆက်နိုင်ခဲ့ကြတယ်။ ဆေးရုံကနေမကြာခဏထွက်ပြေးတဲ့ကောင်လေးတစ်ယောက် ပြန်လည်ထူထောင်ရေးဂေဟာရောက်နေပြီဆိုတဲ့သတင်းကြားတော့ ကင်ညာနိုင်ငံတစ်ဝန်းလုံးက ငွေနဲ့တခြားအကူအညီမျိုးစုံဟာ ပက်ထရစ်ဆီရောက်လာခဲ့ပါတယ်။
ပက်ထရစ်ရဲ့ဘ၀အတော့်ကိုပြောင်းလဲသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုရမှာပါ။ ကြောင်တောင်တောင်မျက်လုံးတွေနဲ့ ယိုယွင်းနေတဲ့သူ့မျက်နှာဟာ အချိန်တော်တော်ကြာပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ ပုံမှန်ပြန်ဖြစ်သွားခဲ့တယ်။ နောက်ပြီး သူ့အနေနဲ့ ဟင်ဂါ လို့ခေါ်တဲ့မီနီမတ်လေးဖွင့်ပြီး ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလေးတောင်လုပ်နေပါပြီ။
ဆေးလုံးဝဖြတ်လိုက်ပြီး လူကောင်းပကတိဖြစ်သွားတဲ့ ပက်ထရစ်ရဲ့ပုံစံကတော့ မယုံနိုင်စရာပါပဲ။
“ ကျွန်တော် လူအသစ်တစ်ယောက်ဖြစ်သွားသလိုပဲ ..။ အဲဒီမှောင်မိုက်ပြီး ဆိုးဝါးတဲ့ ဆေးသမားတစ်ယောက်ရဲ့ဘ၀မျိုးလည်းဘယ်တော့မှပြန်မဖြစ်ပါစေနဲ့လို့ ဘုရားသခင်ဆီမှာ နေ့စဉ်ဆုတောင်းတယ် “
ပက်ထရစ်တို့နေထိုင်တဲ့ ကင်ညာနိုင်ငံဟာ နှစ်ပေါင်းများစွာကြာအောင် အာဏာရှင်တို့ရဲ့အုပ်ချုပ်မှု၊ လူမျိုးရေးပြသနာတွေ နဲ့ မူးယစ်ဆေးဝါးဒဏ်တွေကိုခံခဲ့ရတဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပြီး အခုထိလည်း မြို့တော်နိုင်ရိုဘီထဲမှာ မူးယစ်ဆေးတွေအလွန်အမင်းပြန့်နှံ့နေဆဲဖြစ်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ပက်ထရစ်ရဲ့ အကြောင်းလေးကနေကျွန်တော်တို့ဘာကိုသင်ခန်းစာယူကြမလဲ ? ဘယ်လောက်ပဲ ဘ၀ဟာ ဆိုးရွားစုတ်ပြတ်နေပါစေ။ ကိုယ့်ဘေးနားမှာရှိတဲ့ သူငယ်ချင်းကောင်းတွေ၊ လူကောင်းတွေသာရှိမယ်ဆိုရင် မင်းဘ၀ကို အသစ်ကပြန်စဖို့ဘယ်တော့မှနောက်မကျသေးပါဘူး ဆိုတာပါပဲ။
ကိုယျ့အပျေါစဆရက လုပျတဲ့သူတှကေို အကောငျးဆုံးတုနျ့ပွနျနိုငျဖို့နညျးလမျး ( ၆ ) ခကျြ
ဂပြနျနိုငျငံက “Suicide Forest” လို့သိကွတဲ့ ခွောကျခွားဖှယျတောအုပျကွီး Aokigahara
သီခငျြးသီဆိုခွငျးကနေ ရနိုငျမယျ့ Immunoglobulin (A) ပရိုတငျး ကောငျးကြိုး (၁၀)ခကျြ